Ikozvino mamiriro eCydia Substrate yeIOS 8.3 | IPhone nhau
Patakadzidza kuti TaiG yakanga yaburitsa chishandiso chayo kumatirongo ekupaza maturusi neIOS 8.3 yakaiswa, hapana aifungidzira zvese matambudziko atanga tichisangana nawo naye. Zvinonzwisisika kuti zvikanganiso zvinoonekwa neyekutanga vhezheni yemajeri, asi zvikanganiso zvatakashandiswa hazvisi izvo zvikanganiso zvatakaona.
Chinhu chinowanzoitika mumavhezheni ekutanga ejailbreak ndeyekuti sisitimu haina kugadzikana, ichikonzera kuvhara kana kusashanda kwechishandiso. Asi TaiG Jailbreak 2.0.0 yauya neguhu (inova iri miviri) iyo inotadzisa vashandisi kupedzisa maitiro. Rimwe dambudziko, iro "rinonzwisisika", ona zvakatorwa, ndizvozvo Cydia Substrate (inodikanwa kune akawanda ma tweaks) haishande, izvo zvinoita kuti jailbreak ive zvishoma (muchokwadi, yakawanda) "yakaremara."
In the TaiG yepamutemo peji muChirungu, inotaura zvakajeka kuti «Cydia Substrate haienderane neIOS 8.2 uye 8.3 […] Mirira kugadzirisa kwayo nokushivirira", Izvo zvakatitungamira tese mukuvhiringidzika. Kana uchiverenga chinyorwa ichi, maziso ese akatarisana nemusiki weCydia, Saurik, asi, muchokwadi, iye anofanirwa kugadzirisa chishandiso ndiTaiG, kwete Saurik.
As @ i0n1c yakacherechedzwa, kernel chigamba (pa CS_RESTRICT) ndiyo yakapusa gadziriso yeSpstrate pane iOS 8.3; @taig_jailbreak inofanira kunge iine update kunze munguva pfupi.
- Jay Freeman (saurik) (@saurik) June 23, 2015
Iyo kernel chigamba inodiwa kuti Cydia Substrate ishande sezvazvinofanira uye iro basa rinowira pamafudzi echikwata cheTaiG. i0n1c, iyo ine mukurumbira wekushaikwa kwetsitsi asi iri KUTENDA kuti yanga ichiongorora chishandiso kubva pakutanga, yakaburitsa tweet iyo yakaburitswa naSaurik ichisimbisa (pamusoro pemitsara iyi). Nguva pfupi yapfuura, uye atarisana neanofungidzirwa mhomho yezvikumbiro zveSaurik kuti akurumidze, musiki weCydia akaburitsa zvinotevera.
Sezvo vanhu vachiri kuita kunge vavhiringidzika: kugadzirisa Substrate pane iOS 8.3, @taig_jailbreak (kwete ini) ichagadzirisa iyo jailbreak kernel chigamba (kwete Substrate).
"Sezvo vanhu vachiri kuratidzika kunge vavhiringidzika: kugadzirisa Substrate muIOS 8.3, @taig_jailbreak (kwete ini) ichagadzirisa kernel chigamba kubva mujeri) (kwete Substrate)."
Sezvauri kuona mune inotevera skrini, TaiG yakapindura kumusangano mushandisi achiti «isu tiri kuyedza kusunungura iyo update nekukurumidza sezvazvinogona. Hazvizotora nguva yakareba. Muchokwadi, isu tinosunungura yekuvandudza nhasi (Beijing nguva)«. Zvingangodaro, iyo yekuvandudza ichaonekwa muCydia nekukurumidza painowanikwa. Kune rimwe divi, vhezheni 2.0.1 yeTaiG jailbreak inofanirawo kuburitswa, iyo inosanganisira iyi yekuvandudza uye pamwe gadzirisa kutadza kwekutadza kuiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Ikozvino mamiriro eCydia Substrate yeIOS 8.3
Ndakaita jailbreak kaviri pane yangu iphone 6 uye uye mukubvarura masystem skrini yakanyangarika (inoramba isina chinhu), kechipiri, zvese zvaiita kunge zviri kushanda zvakanaka asi mushure memaawa akati wandei, zvakange zvisisina chinhu zvakare.
Chero nzira yekugadzirisa izvi?
Mhinduro yekutadza kwejeri, kana iwe uchikwanisa kudaro, hapana chimwe kunze kwekushandisa iTunes 12.0.1 ..., kumirira cydia inogadziridza, ndatenda neaya madiki manotsi notes
Pindura kune enry
Ngatione, hazvisati zvajeka kwauri, ivo vanofanirwa kubvarura kernel, saka chavanofanira kugadzirisa chishandiso chekuita jeri, hapazove nekuvandudzwa muecydia, ivo vanofanirwa kuwana yekuvandudzwa kwechishandiso chekuita. jeri
Hongu hama, chinja vhezheni yetunes, zvakandishandira, zvakakwana, ingoisa itunes 12.0.1 uye wagadzirira! Kutenda kune wese munhu akapa mhinduro !! Kumirira iyo update kuti ishandise cydia sezvakange zvakatemwa naMwari 🙂
Pindura kuna Cesar A.
Chinhu chiripo apa ndechekuti vanhu vazhinji havateerere, havazive zvavari kunyatsoita, uye vanoziva chete kutevedzera dummy's bhuku kana ivo vapaza jeri mudziyo wavo. Uye zvino kana chimwe chinhu chisiri kufamba zvakanaka kekutanga, iwe unogona kungopopota uchitaura kuti kupunzika kwejeri hakushandi (chete avo vasina kumbozviita vakaponeswa). Dai ivo vakamira kuverenga zvishoma kubva apo yapfuura jailbreak yaive kusvika kuIOS 8.1.2, zvishandiso zveTaiG zvakatoonekwa ipapo kuti vakapa matambudziko kana vachishandisa iTunes vhezheni yakakwira kupfuura 12.0.1.26. Kana iyo jailbreak isingashande pamwe neshanduro dzazvino dzeTunes, ichave yechimwe chinhu kwavari (kunyangwe vangadai vakazvitaura, ichokwadi) kuti havagone kutenderera, chero chikonzero. Izvo zvakati, iro chete dambudziko randinoona neiyi jailbreak ndeyekuti haina kuenderana neCydia Substrate. Zvimwe zvese zvasara, kana kuti zvakakwana kunongedza kumhinduro, pasina kuzvidza, kutuka timu iyi. Kwaziso.
Ndinobvumirana newe. Pakarepo ini ndikasvetuka iko kukanganisa kwevatyairi veTunes, ndakafunga kuti yaive nekuda kweshanduro, saka ndakadzika kusvika pa12.0.1.26 uye ndizvozvo. Ndakanga ndisina matambudziko ekuvhara mujeri. Vanhu vanoda kuti mhinduro dzese dzive padyo, uye havaedze kuzviwana.
Dany Molina akadaro
Nekureruka kwazvo kuverenga uye kuona kuti Jeri harisati rakavimbika uye kuti kungozviita izvozvi kunopa zvikanganiso, kunetsekana nekuverenga zvinhu zvisati zvaitika uye unodzivirira kudziya musoro kwakawanda.
Pindura Dany Molina
Nicolas Nieto Martinez akadaro
Iyo Cydia Substrate inogona kuwanikwa masikati here?
Pindura Nicolás Nieto Martinez
Sebastian Ignoti akadaro
Udza nguva uye ini ndinobata Taig saka anozvigadzirisa iwe xD
Pindura Sebastián Ignoti
Yakanonoka zvakadii ... xD
Shamwari akatoita jailbreak
Ini handizive kuti nei vachichema chinhu chimwe chete chinogara chichiitika, panongobuda jailbreak, iwe unofanirwa kumirira saurik kuti ivandudze substrate, matambudziko ane iyo jailbreak ane mashoma, chii chinonyadzisa uye kushayikwa kwekutonga, sezvaungaona kuti kusvika parizvino ivo vanopinda munyika yejasbreak, sezvo iwe uchiona kuti havana kumboita chaiyo jailbreak muios 5 kana 6 kuti zvaive zviripo kuita kuti ishande iko kwawaifanira kukumbira kune wako opareta sim kushanda kana kuti yaisazoramba yakafa pakutangazve, vanochema nekuti isati yati cydia yakagadziridzwa, Kukuyeuchidza zvishoma, kujekesa kwejeri uye Cydia zvinhu zviviri zvakasiyana, dzidza kusiyanisa. rega kuchema uye ndoda kupa kutenda nekuti iwe wakakwanisa kugadzira kupunzika kwejere uko mutambo pakati pevabheki nemaapuro unowedzera uye nekuwedzera nekuvhara magonhi ejele uye kana iwe ukaona kuputsika kwejeri kuchishungurudza seizvi, unogona kuenda kuAndroid uye akangwara.
uye ndiani akakumbira kushora kwako kunovava kwehupenyu? Uyo anoziva zvakanyanya nezvese zvinhu uye asinganyatso kuziva chero chinhu anofanira kugara achibuda, chengetedza hupenyu hwako, wakangwara
Mhoroi, ndine sprint iPhone 5, neiri jeri ndinogona kurodha pasi Rsim chigamba, handiti?